मेसीले आँसु पुछेको टिस्यू पेपरको मूल्य १० लाख डलर – Eps Sathi
मेसीले आँसु पुछेको टिस्यू पेपरको मूल्य १० लाख डलर
August 18, 2021 809
काठमाडौं: बार्सिलोनाको २१ वर्षे यात्रापछि क्याटलान क्बलबाट बिदाइ पाएका अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनेल मेस्सीले पत्रकार सम्मेलनमा आँसु पुछ्न प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर लि’लामीमा राखिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा निकै भा’वुक देखिएका मेस्सी कार्यक्रमकै दौरान पोडियमअघि रो’एका थिए। आँसु पछ्नका लागि उनकी श्रीमती एन्टोनेला रोकुज्जोले टिस्यु पेपर दिएकी थिइन्। त्यही टिस्यु पेपर अहिले लि’लामीमा राखिएको हो। त्यसको आधार मूल्य १० लाख अमेरिकी डलर तो’किएको छ। त्यो टिस्यु पेपर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित एक जनाले राखेका थिए।
कम्प्टी स्पोर्ट्स डटकमका अनुसार मेसीले आँसु पुछेको टिस्यू पेपर त्यसबेला एक व्यक्तिले टिपेका थिए । र, अहिले त्यो पेपर लि’लामीमा राखिएको छ । लि’लामीमा त्यो टिस्यू पेपरको मूल्य १० लाख डलर तोकिएको छ । हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय लि’लामी वेबसाइट मेइकेदौमा राखिएको टिस्यू पेपरको मूल्य १० लाख डलर भनी उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको स’टही दरमा यसको नेपाली मूल्य ११ करोडभन्दा धेरै हुन्छ ।
सू’चना अनुसार त्यहाँ मेस्सीको डी’एनए छ, जसलाई उनीजस्तै खेलाडीको क्लो’निङ गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बार्सिलोना क्लबका स’र्वाधिक उपाधि विजेता र गोलकर्ता मेस्सी अहिले पीएसजीमा छन्। उनले पीएसजीमा ३० नम्बरको जर्सी लगाउने भएका छन्।
Prevकोरिया पठाउने प्रकृया सुरु, सिधा फ्लाइटका लागि भयो टेण्डर आव्हान
Nextअमेरिकी से’नाले छाडेमा कोरियाको हालत पनि अफगानस्थानको जस्तै हुन्छ भनेपछि कोरियनहरु रि’षले आगो
आखिर किन कोरियामा यि झोला तथा घडी भनेजति किन्न पाइदैन त?
विदेशबाट आउने नेपालीले एउटाभन्दा बढि मोबाईल ल्याएमा भन्सार लाग्ने, जानौं भन्सार कति लाग्छ?
अ’न्तिम अ’वस्थामा रहेका आफ्ना बुबा भेट्न क्वारेन्टिन नि’यम तो’ड्ने महिलालाई जरि’वाना तिराइयो
कोरियामा बढ्ने भयो बिजुलीको भाउ, कति बढ्दैछ हेरौं